कसरी गर्ने घरमै फेसियल ? « Drishti News – Nepalese News Portal
कसरी गर्ने घरमै फेसियल ?
१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ५ : ५७ मा प्रकाशित
अनुहारको छाला स्याहार गर्ने विभिन्न प्रकृया र पद्धति छन् । त्यसमध्ये महत्वपूर्ण र सहज प्रक्रिया हो– फेसियल । फेसियलले छालालाई स्वस्थ, नरम, चम्किलो र सुन्दर बनाउँछ । फेसियलमा क्लिन्जिङ एक्सफोेलिएटिङ, मसाज, स्टिमिङ प्याक समावेश हुन्छ । यसले छालालाई भित्रैबाट सफा गर्दै मृत कोषिका हटाउँछ । फेसियलको क्रममा अनुहारमा हुने मालिसले छालामा रक्तसञ्चार बढाउँछ, मांशपेशीलाई कसिलो बनाउँछ र छालाबाट बिकार बाहिरिन्छ ।
छाला स्वस्थ राख्न २० वर्ष माथिका महिला र पुरुष दुवैले फेसियल गर्न मिल्छ । उमेर बढ्दै जाँदा कोषिका उत्पादन कम हुँदै जाने भएकाले फेसियल गर्दा फाइदा हुन्छ । किनकि, फेसियलले नयाँ कोषिका उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ । महिनामा एकपटक फेसियल गर्नु राम्रो मानिन्छ । उचित समयमा फेसियल गरे अनुहारमा दाग धब्बाहरु आउन पाउँदैन । साथै, अनुहारको छालालाई चाँडै चाउरी पर्नबाट पनि बचाउँछ ।
फेसियल विशेषज्ञ सेवा हो । त्यसैले विज्ञसँग सल्लाह गरेरमात्र फेसियल गर्दा उपयुक्त हुन्छ । छालाको प्रकारअनुसार राम्रो र गुणस्तरीय फेसियल सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ । छाला सम्बन्धि ज्ञान नभएका व्यक्तिबाट गरिने फेसियल र त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीले छालामा उल्टो असर गर्ने भएकाले सचेत हुनुपर्छ ।
विज्ञसँग मात्र फेसियल गर्ने भनिएता पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव हुँदैन । निषेधाज्ञाका कारण ब्यूटी पार्लर तथा सलोन बन्द छन् । तर, अनुहारको स्याहार नगर्ने कुरा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा घरमै भएका प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गरेर पनि छालालाई स्वस्थ, चम्किलो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गरेर घरमै फेसियल गर्ने विधि प्रस्तुत छ :
आवश्यक सामग्री र प्रयोग विधि
१. अनुहार सफा गर्ने : सबैभन्दा पहिला सधै प्रयोग गर्ने फेसवासले अनुसार सफा गर्ने । यसले अनुहारको चिल्लोपन कम गर्छ र सफा हुन्छ ।
२. क्लिन्जिङ : एलोभेरा काटेर जेल निकाल्ने । एलोभेर जेलमा बराबर मात्रामा दुध मिसाइ एक चम्चा मह हालेर पेष्ट बनाउने । उक्त पेष्ट अनुहारमा लगाई हल्का हातले पाँच मिनेट मालिस गरी मनतातो पानीले पखाल्ने । यसले छालालाई भित्री तहबाटै सफा गरी मृत कोषिका हटाउँछ र छालालाई नरम तथा ताजा बनाउँछ । त्यसपछि फेसियलका लागि छाला तयार हुन्छ ।
३. स्क्रबिङ : चामलको पिठो, एक चम्चा एलोभेरा जेल, आधा चम्चा मह र केही थोपा कागतीलाई सानो कचौरामा राम्रोसँग घोल्ने । त्यसपछि अनुहारमा लगाई गोलो–गोलो आकारमा मालिस गर्ने र मनतातो पानीले पखाल्ने । यो एक्स्फोलिएसनको लागि उपयुक्त हुन्छ । यसले छालाबाट मृत कोषिका हटाई छालालाई नरम बनाउँछ । डढेको छालाको उपचार हुनुका साथै दाग धब्बासमेत कम हुन्छ ।
४. स्टिमिङ : एउटा भाडामा सहन सकिने तापक्रमको तातो पानी राख्ने । त्यसमा टावल भिजाई अनुहार सेक्ने । यसले छालाको रोमछिद्र खोल्न मद्दत गरी छालालाई हाइड्रेड गर्छ ।
५. एक्स्ट्रक्याक्सन : आवश्यक परेमा ब्ल्याकहेड्स निकाल्ने ।
६. मसाज : पाकेको केरालाई मसिनो काटेर मिच्ने वा मिक्स्चरमा पिस्ने । दुई चम्चा केराको पेष्टमा दुई चम्चा दही र एउटा भिटामिन–ई क्याप्सुल मिसाई पेष्ट तयार पार्ने । उक्त पेष्ट अनुहारमा लगाई १० मिनेट मालिस गर्ने । प्रस्तुत सामग्री प्रयोग गरी तयार पारिएको पेष्टले अनुहारमा मालिस गर्दा सर्कुलर, पिन्चीङ, ट्यापिङ, एफ्लोरेज जस्ता मसाज तलबाट माथितिर गर्न सकिन्छ । आँखाको वरिपरि पनि राम्रोसँग मालिस गर्नुपर्छ । यसले डार्क सर्कल र आँखा वरिपरिको चाउरीपन कम गर्छ ।
पाकेको केरा, दही, मह र भिटामिन–ईको मिश्रणले अनुहारको दाग धब्बा हटाउँछ र गोरो बनाउँछ । छालालाई नमी प्रदान गरी नरम, मुलायम र ताजा बनाउँछ । मसाजले रक्तसञ्चार वृद्धि भइ प्राकृतिक रुपमा छालालाई कसिलो र आकर्षण बनाउन मद्दत गर्छ । १० मिनेटको मालिसपछि चिसो पानीमा रुमाल डुबाई थपथपाउने । यसले छालामा तापक्रम बढेको भए कम गर्छ ।
७. फेस प्याक : मसिनो काटेर खरबुजाको पेष्ट बनाइ दही, दुई चिम्टी बेसार र आधा चम्चा मह मिसाएर प्याक बनाउने । उक्त प्याक अनुहारमा लगाइ सुक्न दिने । सुकेपछि चिसो पानीले पखाल्ने । खरबुजामा प्रशस्त मात्रामा एन्टीअस्सिडेन्ट र भिटामिन ‘सी’ र ‘ए’ हुने भएकाले अनुहारबाट चाउरीपन हटाउँछ । साथै, छालामा कोलाजन बढाउन मद्दत गर्छ । छालालाई हाइड्रेट गराई स्वस्थ, नरम र चम्किलो बनाउँछ ।
८. टोनर र मोइस्चराइजर : रुमालले अनुसार पुछेर टोनर र मोइस्चराइजर लगाएर छोड्ने ।
माथि भनिएको छ कि, फेसियल विशेषज्ञ सेवा हो । तर, यसका प्राकृतिक पद्धति पनि छन् । किनकि, प्राकृतिक पद्धतिबाट नै कृतिम पद्धति बिकास भएका हुन् । त्यसैले तपाईं पाठकका लागि निषेधाज्ञाको समयमा घरमै बसेर फेसियस गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले प्राकृतिक माध्यमबाट फेसियल विधि प्रस्तुत गरिएको हो । प्रस्तुत सामग्री प्रयोग गरी फेसियल गरेर अनुहार सुन्दर बनाउन सकिन्छ । तर, कसैलाई फलफुलहरुले एलर्जी हुनसक्छ । एलर्जी भइ अनुहार चिलाउने वा पोल्ने भयो भने प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।
एरोमा थेरापी र यसबाट हुने फाइदा
सुगन्धको प्रयोगबाट गरिने उपचार पद्धतिलाई ‘एरोमा थेरापी’ भनिन्छ । विशुद्ध तेल (जसलाई इसेन्सियल ओयल पनि
गलकोट । अस्पतालभन्दा पहिला सञ्चालनमा आएका आयुर्वेद औषधालय कोरोना आउनुभन्दा पहिला प्रायः सुनसान अवस्थामा थिए
काठमाडौं । मानिसहरु अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण विभिन्न प्रकारका रोगहरुबाट ग्रसित बन्ने गरेका छन् । यसकारण